ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ (၁၄. ၁၁. ၂၁၀၈) | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းထွဋ် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကျီလင်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် အမြဲတမ်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ms.Che Xiulan ဉီးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(ခ)-ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး Website မှ လွှင့်တင်ထားရာတွင် မည်သည့် Font အသုံးပြုထားပါသနည်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် အသုံးများသော Zaw Gyi Font ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-မန်တုံမြို့နယ်၊ နမ့်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ဟိုင်းကျေးရွာ(မိုင်းမော်ဒေသ)အား လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-မာန်အောင်မြို့နယ်မြို့ပေါ် (၅) ရပ်ကွက်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း သွယ်တန်းထားပြီးသော ကျေးရွာ အုပ်စု (၁၂) အုပ်စုရှိ ကျေးရွာ (၅၇) ရွာအား လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက် နေသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(င)-မင်းဘူး(စကု)မြို့နယ်၊ မန်းရေနံမြေမှ ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများ လုပ်အားခပြည့်ဝစွာ ပေးနိုင်ရေး မည်ကဲ့သို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-မုံရွာမြို့၊ တိုင်းဆေးရုံကြီး ဆောက်လက်စ (၅) ထပ်အဆောက်အဦ အပြီးသတ်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင်‌့ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-မံစီမြို့နယ်၊ မန်ဝိန်းကြီးကျေးရွာတွင် ပြည်သူလူထုများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် တိုက်နယ်ဆေးရုံတစ်ရုံ ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်